Air Con သုံးနေသူများ မဖြစ်မနေ သိသင့်ထားသင့်သည့်အကြောင်းအရာများ - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းလမ်းများ > Air Con သုံးနေသူများ မဖြစ်မနေ သိသင့်ထားသင့်သည့်အကြောင်းအရာများ
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 3:43 AM နည်းပညာဗဟုသုတ, နည်းလမ်းများ
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန်အဲယားကွန်း အသုံးပြုသောအခါ လိုက်နာသင့်သည့် (အခြေခံ) အချက်လက်ထဲမှအချို့ ဖြစ်သော (၁၉ချက်) ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် .
၁။ Air con အပိတ်အဖွင့် လုပ်သည့်အခါ ပလပ်ကိုဆွဲဖြုတ်ခြင်း၊ ထိုးသွင်းခြင်းဖြင့် အပိတ်အဖွင့် လုပ်ခြင်း (လုံးဝ) မလုပ်ပါနှင့်။ Shock ဖြစ်ပြီး စက်ပျက်တတ်ပါသည်။
၂။ Remote Control ကို အသုံးပြုပြီး မိမိနှင့်သင့်တော်မည့် အပူချိန်မှာ ချိန်ထားသင့်ပါသည်။ (အရမ်း)မအေးပါစေနှင့်။လူကို (တိုက်ရိုက် )လေမထိုးထားပါနှင့်။အထူးသဖြင့် အိပ်သည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ ၊ ညဘက်လူအိပ်နေချိန်ဖြစ်စေ လူဆီကို အအေးတည့် တည့်မကျရောက်အောင်သတိထားသင့်ပါသည်။
၃။ ည အိပ်ချိန် များတွင်အအေးဓာတ်ကိုထိန်းရန်အချိန်ထိန်းခလုတ်(Timer) ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၄။အခန်းတွင်းကို အအေးဓာတ်မပေးပဲ လေချည်းသက်သက်ပေးချင်ပါက Fan mode ပန်ကာကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပန်ကာချည်းသုံးခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်ခြွေတာရာရောက်ပါသည်။
၅။အခန်းတွင်း အပူချိန် အား သင့်သလောက်သာချိန်ထားသင့် ပါသည်။ အပူချိန် ပူလွန်း / အေးလွန်းလျှင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ပိုကုန်စေနိုင်သည်။
၆။ Remote Control အဝေးထိန်း ခလုတ် ကို Air con အောက် တစ်ပေခန့်အကွာရှိ နံရံတွင် အထိုင်ခွက်ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပါ။ လွတ်မကျပါစေနှင့် ။ ရေ နှင့် အချိုရည် ကဲ့သို့သော အရည်များမထိပါစေနှင့် ။ လွတ်ကျလျှင် ရေစင် လျှင် Remote ပျက်စီးပြီး အလုပ်ကောင်းကောင်း လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၇။ Remote Control အဝေးထိန်း ခလုပ် အား Air con နှင့် ၁၅ပေခန့် အကွာအဝေး အတွင်း၌သာ သုံးပါ။သိပ်ဝေးလွန်းလျှင် အလုပ်မလုပ်ပါ။
၈။ Air con နှင့် Remote controlတို့ကြားတွင် ခန်းစည်း / ကန့်လန့်ကာ တို့နှင့်ခံနေလျှင် Remote ကောင်းကောင်း အလုပ် မလုပ်နိုင်ပါ။
၉။ Air con Indoor Filter ( လေစစ်ဆန်ကာ) ကို ဖြစ်နိင်လျှင် တစ်လလျှင် တစ်ကြိမ်ခန့် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးပါ ။ ခရီးရက်ရှည်ထွက်စရာရှိ လျှင်
Air con ကို သေသေချာချာ ပိတ်ခဲ့ပါ ။
၁၀။ Air conရဲ့ Indoor unit အတွင်း( သို့မဟုတ်) အပြင်ဘက်ရှိ အစိတ်အပိုင်း များကို ရေဖြင့် ဆေးပြီး သန့်ရှင်းရေး မလုပ်သင့်ပါ ။ Shock ဖြစ်ပြီး ဓာတ်လိုက်တတ်သောကြောင့် ကျွမ်းကျင်သူများကို သာ ခေါ်လုပ်သင့်ပါသည်။
၁၁။ Air con ရှေ့တည့်တည့်တွင် မည်သည့် ပစ္စည်း မှ ခံမနေပါစေနှင့် လေလမ်းကြောင်းရှေ့တွင် အရာဝတ္ထု ပစ္စည်းများ ပိတ်ဆို့နေလျှင် လိုအပ်တဲ့ အအေးဓာတ် မရှိနိုင်ပါ။
၁၂။ Air con တွင် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အချက်ပေး ကိရိယာပါရှိပါသည်။ Aircon ပေါ်သို့နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ကျရောက်နေပါကကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ထို့ကြောင့် နေရောင်ခြည်တိုက်ရိုက် ကျရောက်မနေစေရန် ခန်းစီး ကန့်လန့်ကာတို့ဖြင့် ပြတင်းပေါက်များအား ကာထားသင့်ပါသည်။
၁၃။ အခန်း ထဲ၌ အနံ့အသက် မကောင်းတော့ဘူးဆိုလျှင် ပြတင်းပေါက်များအားဖွင့်ထားပြီး လေကောင်းလေသန့်ရအောင် လုပ်ပါ။
၁၄။ မီးလောင် စေတတ်သောမှုတ်ဆေး နှင့်သုတ်ဆေး များအား Air con နားမှာ အသုံးမပြုသင့်ပါ ။ တင်နာ ပိုးသတ်ဆေး ရေနံဆီ ဓာတ်ဆီကဲ့သို့သော အရည်များဟာ Air con ကို ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပါသည်။
၁၅။ မီးပူ မီးဖိုတို့လို အပူထုတ်သည့်ပစ္စည်းများအား Air con နှင့်ဝေးဝေးမှာထားပါ ။ အပူချိန်မြင့်လျှင် Air con ပျက်တတ်ပါသည်။
၁၆။ Air con မှ ညှော်နံ့ရလျှင် ခလုတ် ကို ချက်ခြင်းပိတ်ကာ ပြင်ဆိုင်သို့အကြောင်းကြားပါ
၁၇။ Outdoor unit Condenser ထဲသို့တုတ် (သို့မဟုတ်) လက်ဖြင့် မထည့်ပါနှင့် ။ အထဲမှာ အရှိန်ပြင်းပြင်း လည်နေတဲ့ ပန်ကာ ရှိသောကြောင့် လူကို အန္တာရာယ် ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။
၁၈။ Outdoor unit Condenser ပေါ်တွင် အဝတ် များလှန်းခြင်း၊ ပစ္စည်းများတင်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။စက်အပူလွန်ပြီး ပျက်စီးတတ်ပါသည်။
၁၉။အိမ်အပြင်ရှိ Outdoor unit Condenser တွင် အမှိုက်သရိုက်များ ကပ်နေမနေ ပုံမှန် စစ်ဆေးပါ။ အမှိုက်များကပ်နေလျှင် ရှင်းပေးပါ။
Air Con သုံးနသေူမြား မဖွဈမနေ သိသငျ့ထားသငျ့သညျ့အကွောငျးအရာမြား
[Unicode] ဖွငျ့ဖတျရနျအဲယားကှနျး အသုံးပွုသောအခါ လိုကျနာသငျ့သညျ့ (အခွခေံ) အခကျြလကျထဲမှအခြို့ ဖွဈသော (၁၉ခကျြ) ကိုမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ .
၁။ Air con အပိတျအဖှငျ့ လုပျသညျ့အခါ ပလပျကိုဆှဲဖွုတျခွငျး၊ ထိုးသှငျးခွငျးဖွငျ့ အပိတျအဖှငျ့ လုပျခွငျး (လုံးဝ) မလုပျပါနှငျ့။ Shock ဖွဈပွီး စကျပကျြတတျပါသညျ။
၂။ Remote Control ကို အသုံးပွုပွီး မိမိနှငျ့သငျ့တျောမညျ့ အပူခြိနျမှာ ခြိနျထားသငျ့ပါသညျ။ (အရမျး)မအေးပါစနှေငျ့။လူကို (တိုကျရိုကျ )လမေထိုးထားပါနှငျ့။အထူးသဖွငျ့ အိပျသညျ့အခါတှငျဖွဈစေ ၊ ညဘကျလူအိပျနခြေိနျဖွဈစေ လူဆီကို အအေးတညျ့ တညျ့မကရြောကျအောငျသတိထားသငျ့ပါသညျ။
၃။ ည အိပျခြိနျ မြားတှငျအအေးဓာတျကိုထိနျးရနျအခြိနျထိနျးခလုတျ(Timer) ကို အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။
၄။အခနျးတှငျးကို အအေးဓာတျမပေးပဲ လခေညျြးသကျသကျပေးခငျြပါက Fan mode ပနျကာကို အသုံးပွုနိုငျပါသညျ။ ပနျကာခညျြးသုံးခွငျးဖွငျ့ လြှပျစဈဓါတျခွှတောရာရောကျပါသညျ။
၅။အခနျးတှငျး အပူခြိနျ အား သငျ့သလောကျသာခြိနျထားသငျ့ ပါသညျ။ အပူခြိနျ ပူလှနျး / အေးလှနျးလြှငျ လြှပျစဈဓါတျအားကို ပိုကုနျစနေိုငျသညျ။
၆။ Remote Control အဝေးထိနျး ခလုတျ ကို Air con အောကျ တဈပခေနျ့အကှာရှိ နံရံတှငျ အထိုငျခှကျဖွငျ့ တပျဆငျထားပါ။ လှတျမကပြါစနှေငျ့ ။ ရေ နှငျ့ အခြိုရညျ ကဲ့သို့သော အရညျမြားမထိပါစနှေငျ့ ။ လှတျကလြှငျ ရစေငျ လြှငျ Remote ပကျြစီးပွီး အလုပျကောငျးကောငျး လုပျနိုငျမညျမဟုတျပါ။
၇။ Remote Control အဝေးထိနျး ခလုပျ အား Air con နှငျ့ ၁၅ပခေနျ့ အကှာအဝေး အတှငျး၌သာ သုံးပါ။သိပျဝေးလှနျးလြှငျ အလုပျမလုပျပါ။
၈။ Air con နှငျ့ Remote controlတို့ကွားတှငျ ခနျးစညျး / ကနျ့လနျ့ကာ တို့နှငျ့ခံနလြှေငျ Remote ကောငျးကောငျး အလုပျ မလုပျနိုငျပါ။
၉။ Air con Indoor Filter ( လစေဈဆနျကာ) ကို ဖွဈနိငျလြှငျ တဈလလြှငျ တဈကွိမျခနျ့ သနျ့ရှငျးရေး လုပျပေးပါ ။ ခရီးရကျရှညျထှကျစရာရှိ လြှငျ
Air con ကို သသေခြောခြာ ပိတျခဲ့ပါ ။
၁၀။ Air conရဲ့ Indoor unit အတှငျး( သို့မဟုတျ) အပွငျဘကျရှိ အစိတျအပိုငျး မြားကို ရဖွေငျ့ ဆေးပွီး သနျ့ရှငျးရေး မလုပျသငျ့ပါ ။ Shock ဖွဈပွီး ဓာတျလိုကျတတျသောကွောငျ့ ကြှမျးကငျြသူမြားကို သာ ချေါလုပျသငျ့ပါသညျ။
၁၁။ Air con ရှတေ့ညျ့တညျ့တှငျ မညျသညျ့ ပစ်စညျး မှ ခံမနပေါစနှေငျ့ လလေမျးကွောငျးရှတှေ့ငျ အရာဝတ်ထု ပစ်စညျးမြား ပိတျဆို့နလြှေငျ လိုအပျတဲ့ အအေးဓာတျ မရှိနိုငျပါ။
၁၂။ Air con တှငျ ခရမျးလှနျရောငျခွညျ အခကျြပေး ကိရိယာပါရှိပါသညျ။ Aircon ပျေါသို့နရေောငျခွညျ တိုကျရိုကျကရြောကျနပေါကကောငျးကောငျးအလုပျမလုပျနိုငျပါ။ထို့ကွောငျ့ နရေောငျခွညျတိုကျရိုကျ ကရြောကျမနစေရေနျ ခနျးစီး ကနျ့လနျ့ကာတို့ဖွငျ့ ပွတငျးပေါကျမြားအား ကာထားသငျ့ပါသညျ။
၁၃။ အခနျး ထဲ၌ အနံ့အသကျ မကောငျးတော့ဘူးဆိုလြှငျ ပွတငျးပေါကျမြားအားဖှငျ့ထားပွီး လကေောငျးလသေနျ့ရအောငျ လုပျပါ။
၁၄။ မီးလောငျ စတေတျသောမှုတျဆေး နှငျ့သုတျဆေး မြားအား Air con နားမှာ အသုံးမပွုသငျ့ပါ ။ တငျနာ ပိုးသတျဆေး ရနေံဆီ ဓာတျဆီကဲ့သို့သော အရညျမြားဟာ Air con ကို ထိခိုကျပကျြစီးနိုငျပါသညျ။
၁၅။ မီးပူ မီးဖိုတို့လို အပူထုတျသညျ့ပစ်စညျးမြားအား Air con နှငျ့ဝေးဝေးမှာထားပါ ။ အပူခြိနျမွငျ့လြှငျ Air con ပကျြတတျပါသညျ။
၁၆။ Air con မှ ညှျောနံ့ရလြှငျ ခလုတျ ကို ခကျြခွငျးပိတျကာ ပွငျဆိုငျသို့အကွောငျးကွားပါ
၁၇။ Outdoor unit Condenser ထဲသို့တုတျ (သို့မဟုတျ) လကျဖွငျ့ မထညျ့ပါနှငျ့ ။ အထဲမှာ အရှိနျပွငျးပွငျး လညျနတေဲ့ ပနျကာ ရှိသောကွောငျ့ လူကို အန်တာရာယျ ဖွဈစတေတျပါသညျ။
၁၈။ Outdoor unit Condenser ပျေါတှငျ အဝတျ မြားလှနျးခွငျး၊ ပစ်စညျးမြားတငျခွငျး မပွုလုပျပါနှငျ့။စကျအပူလှနျပွီး ပကျြစီးတတျပါသညျ။
၁၉။အိမျအပွငျရှိ Outdoor unit Condenser တှငျ အမှိုကျသရိုကျမြား ကပျနမေနေ ပုံမှနျ စဈဆေးပါ။ အမှိုကျမြားကပျနလြှေငျ ရှငျးပေးပါ။
Air Con သုံးနေသူများ မဖြစ်မနေ သိသင့်ထားသင့်သည့်အကြောင်းအရာများ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 3:43 AM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် အဲယားကွန်း အသုံးပြုသောအခါ လိုက်နာသင့်သည့် (အခြေခံ) အချက်လက်ထဲမှအချို့ ဖြစ်သော (၁၉ချက်) ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် . ၁။ ...